Momba ny lalamby Burkina Faso | RayHaber | raillynews
HomeIZAO TONTOLO IZAOAFRIKA226 Burkina FasoMomba ny lalamby Burkina Faso
Momba ny lalamby Burkina Faso
24 / 02 / 2020 226 Burkina Faso, AFRIKA, IZAO TONTOLO IZAO, Railway, ANKAPOBENY, Headline
Burkina Faso dia firenena tsy manana tany ao amin'ny faritra andrefan'ny kontinanta afrikanina. Ny Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana ary Côte d'Ivoire dia mamorona mpifanolobodirindrina amin'ny firenena (eo amin'ny lafiny avaratra avy any avaratra). Ilay firenena, izay zanatany Frantsa taloha, dia nahazo fahaleovan-tena tamin'ny taona 1960 tamin'ny anaran'i Upper Volta. Vokatry ny tsy fahatokisana ara-politika amin'ny vanim-potoana taorian'ny fahaleovan-tena, dia nisy ny fanonganam-panjakana, tamin'ny 4 aogositra 1983 teo ambany fitarihan'i Thomas Sankara, ny anarany dia novana ho Burkina Faso vokatry ny revolisiona. Ny renivohitry ny firenena dia Ouagadougou.
Lalambe Burkina Faso
Misy làlan-dalamby iray antsoina hoe Abidjan - Niger Line ao Burkina Faso, izay mampifandray ny renivohitra Abidjan sy ny renivohitr'i Ouagadougou. Ity dingana ity, izay nahasorena an'i Burkina Faso, izay tany iray vokatry ny tsy fahampian'ny ady an-trano tany Ivory Coast dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fitaterana ny vokatra ara-barotra amin'ny ranomasina mankany amin'ny ranomasina. Amin'izao fotoana izao, ny fiara fitateram-bahoaka sy ny mpandeha dia tanterahina amin'ity zotra ity. Tamin'ny vanim-potoanan'i Sankara, na dia nisy aza ny ezaka ilaina natao mba hanitarana ny halavan'ny zotra mankany amin'ny tanànan'i Kaya mba hitondrana ny harena ambanin'ny tany hita eto, dia nofaranana ireo hetsika ireo tamin'ny fiafaran'ny vanimpotoana Sankara.
Ny 33 amin'ny seranam-piaramanidina 2 manerana ny firenena ihany no mandeha amin'ny lalana. Seranam-piaramanidina Ouagadougou, izay eo amin'ny renivohitry Ouagadougou, izay koa ny seranam-piaramanidina lehibe indrindra eto amin'ny firenena, ary ny seranam-piaramanidina ao Bobo-Dioulasso, no seranam-piaramanidina roa mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny firenena.
Ilay firenena dia manana orinasam-piaramanidina iray antsoina hoe Air Burkina, izay miorina ao Ouagadougou renivohitra. Taorian'ny nananganana ny orinasa tamin'ny 17 martsa 1967 tamin'ny anaran'ny Air Volta, dia nanomboka nanatanteraka ny sidina novokarin'ireo orinasa tany frantsa, ary novaina ho fanodinana ny anaran'ny orinasa araka ny revolisiona Sankara ao amin'ny firenena. Raha ny iray amin'ireo mpandray anjara ao Burkina Faso, ampahany amin'ny orinasa Air Burkina dia natokana tamin'ny taona 2002, noho ny fisian'ny vola ara-bola amin'ny Air Afrique, izay nolanian'ny firenena afrikanina maro niaraka tamin'i Frantsa.
Ankoatry ny sidina an-trano dia mikarakara sidina famerenenana ireo orinasam-pifandraisana Air Burkina amin'ny firenena fito samihafa. Ireo firenena izay itondrana sidina iraisam-pirenena dia: Benin, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Senegal ary Togo.
Lalan'i Burkina Faso
Misy lalana 12.506 km manerana ny firenena, ary 2.001 2001 km no misy poavambe. Nandritra ny fanombanana nataon'ny Banky Iraisam-pirenena tamin'ny XNUMX, ny kaompana fitaterana Burkina Faso dia nohombanana tsara indrindra indrindra amin'ny fifandraisany amin'ireo firenena ao amin'ny faritra, Mali, Ivory Coast, GAna, Togo ary Niger.
Sarintany momba ny fitaterana Burkina Faso
Lalàna sy lalàna momba ny fanitsiana ny fitaterana an-dalamby
Torkia Fampiharana ny lalàna momba ny fanalalahana ny Railway Transport ...
Ny filohan'ny sampana DTO Antalya Erol Spoke tamin'ny fitaterana haingam-pandeha sy fitaterana entana hafa
Ny fihaonana EIA dia hatao ao amin'ny tetikasam-pitrandrahana Antalya-Kayseri
Volavolan-dalàna ao amin'ny Railway Transport fanalalahana ny Torkia
Ben'ny tanànan'i Cankesen Miresaka Momba ny Lalànan'ny Lalànan'ny Fanaovan-tsarety (Video)
Momba ny fanorenan-dalamby amin'ny lalamby Baku-Tbilisi-Kars
Fanontaniana momba ny tetikasam-barotr'i Erzincan-Trabzon
Ny lehiben'ny Antoko AK, Elvan Karaman, dia miresaka momba ny fampiasam-bolan'ny làla
Ny minisitry ny fitaterana dia niresaka momba ny tetikasa BTK Railway
Salini Wins Houston Dallas Train Train Tender
Nifarana tamin'ny fitaterana ny vanim-potoana karatra Istanbul